အလေးမခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက် China ဒူးထောင့်အထောက်အပံ့လက်များ | ကွမ်းခြံကုန်း
အလေးမနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ဒူးထောက်လက် \_ t
ပစ္စည်းနိုင်လွန်၊ နီယိုပရင်၊ နီအိုဖရန်၊ နိုင်လွန်၊ Bendable သံမဏိပြားများ
ဒူးထောက် လက်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောလက်ကားချုံ့ဒူးအင်္ကျီလက်အထောက်အပံ့။ Theဒူးထောက်ခြေကျင်းကြွက်သားကြွက်တက်ခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာကြောင့်နာကျင်မှုကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်အသုံးပြုသည်။ elastic ပစ္စည်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ သွေးလည်ပတ်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အလေးမအားဒူးထောက်ခြင်း အင်္ဂါရပ် - ဒဏ်ရာကိုရှောင်ပါ။ ဒူးထောက်ကာကွယ်ပါ။ အသက်ရှူနိုင်သော၊ ချွေးစုပ်ယူခြင်း၊ ဤထည်သည်ကြော့ရှင်းပြီးပထမတန်းစားအရည်အသွေးရှိသောဖဲကြိုးထိုးထည်ဖြစ်ပြီးလှပသောအရောင်ဖြစ်သည်။ Rosette ဇာထည် - အရောင်များစွာရရှိနိုင်သည့်အတွက်သင်သည်အရောင်ကိုကောက်ယူနိုင်သည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ ဤလတ်ဆတ်သောဇာထည်သည်မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားအလှဆင်ခြင်း၊ အဝတ်အထည်၊ ကုလားကာ၊ အိမ်အလှဆင်ခြင်း၊ မွေးဖွားသောဓာတ်ပုံအသစ်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဒူးထောက်ကူခြင်းညွှန်ပြ: Preoperative နှင့် postoperative ဒူး fixing ။ သင့်ရဲ့ဒူးသတ္တုတွင်းများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ ဒူးရွတ်ပျက်စီးခြင်းနှင့်ကျိုးသည်။ ဒူးကွေးညွှန့်ခြင်း၊ အားကစားအားလုံးအတွက်ဝတ်စုံသည်ဒူးကိုအပြေးပြိုင်ခြင်း၊ မြင်းစီးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ဘတ်စကတ်ဘော၊ ဘောလုံးစသည်ဖြင့်ပံ့ပိုးပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရိုးအထူးကုထုတ်ကုန်များတွင်ကျွမ်းကျင်သည် ဒူးထောက်။ ပံ့ပိုးမှု, ခါးနောက်ကျောသတ္တုအထောက်အပံ့, ကိုယ်ဟန်အနေအထားပြင်ဆင်ရေး, Wrist Brace ပံ့ပိုးမှု, တံတောင်ဆစ်သတ္တုတွင်း ပံ့ပိုးမှုစင်တာ ခြေကျင်းသတ္တုအထိမ်းအချုပ် ပံ့ပိုးမှုစင်တာ Shoulder Brace ပံ့ပိုးမှုစင်တာ လည်ပင်းသတ္တုတွင်းအထောက်အပံ့နောက် ... ပြီးတော့။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ feature ဝန်ဆောင်မှု၏တ ဦး တည်းအမိန့်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဒီဇိုင်းတံဆိပ်နှင့်အရောင်သေတ္တာဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်!
ဒူးထောက်အထောက်အကူပြုလက်အောက်ခံထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကိုရှာဖွေနေပါသလား။ သင်၏ဖန်တီးမှုကိုကူညီရန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ အလေးမအားဒူးထောက်ပံ့ပိုးမှုအားလုံးသည်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်ဒူးထောက်အထောက်အကူပြုသည့်တရုတ်မူလစက်ရုံဖြစ်သည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
Professional Elastic အားကစားဒူးထောက်ကွင်း ...
Hot Sale အထူးအရည်အသွေးမြင့်ဒူးထောက်လက်
ဘတ်စကက်ဘော neoprene ဒူးသတ္တုအထည်အိတ်များသည်ပတ္တာများကိုထောက်ပံ့သည်